Ahoana ny fomba fitsaboana ny katarakitra eo imason'ny alika | Tontolo alika
Ny katarakta dia iray amin'ireo olan'ny maso izay mampikaikaika indrindra ireo miaina miaraka amin'ireo volo tsara tarehy ireo. Ny maso dia taratry ny fanahy, ary ny fanahin'ny alika dia tena tsara ka rehefa tsy mahita tsara izy ireo dia matetika ny olona mikarakara azy no sarotra.
Noho izany, hanazava isika ny fomba hitsaboana katarakitra amin'ny mason'ny alika; Amin'izany no hahafantaranao izay tokony hataonao mba hahafahan'ny namanao manohy miaina fiainana tsara 🙂.
1 Inona ny katarakta?
2 Ahoana no itondrana azy ireo?
2.2 Fitsaboana fitsaboana hafa
Inona ny katarakta?
Rehefa misy katarakta ny alika dia inona no hanjo azy dia izay ny solomaso, izay ho toy ny solomaso intraocular, lasa manjavozavo, afaka manana teboka na toerana fotsy sy manga lehibe tokana. Ny alika misy karazany sy taona rehetra dia afaka manana azy ireo, saingy mahazatra kokoa ny fisehoan'izy ireo eo anelanelan'ny 5 sy 7 taona.
Mazava ho azy fa tsy maintsy dinihina fa mpandova izy ireo indraindray. Rehefa mitranga izany dia mety misy alika kely teraka miaraka aminy na hampivelatra azy ireo fotoana fohy aorian'ny nahaterahany.
Ahoana no itondrana azy ireo?
Io ihany no fitsaboana mahomby ho an'ny alika mba hahitana ara-dalàna indray. Miaraka amin'ity fidirana an-tsehatra ity, maharitra adiny iray isaky ny maso, ilay mpitsabo biby esory ny solomaso anao, ka tsy afaka mivoatra indray ny katarakta. Ny ampitso dia hatao ny fizahana aorian'ny fandidiana mba hahitana fa efa sitrana tsara ny maso miasa.
Rehefa mody isika dia tsy maintsy manaraka ny fitsaboana aorian'ny fandidiana izay hahitana antibiotika sy anti-inflammatoire, ary koa ny fiantohana fa ny biby dia tsy manaisotra ny vozon'akanjo Elizabethan ao anatin'ny 2-3 herinandro aorian'ny fidirana an-tsehatra.
Fitsaboana fitsaboana hafa
Rehefa mbola tsy matotra ny katarakta dia mety hanoro hevitra antsika ny mpitsabo biby 2% nilatsaka karnosine antioksidaary koa ampio vitamina A, C ary E. ny sakafo hanemorana ny fampandrosoana ny katarakta. Fa tsy maintsy dinihinao izany ireo fanafody ireo dia tsy mahasitrana.
Raha tiantsika ho afaka hahita ara-dalàna indray ilay namantsika, ny hany zavatra azo atao dia ny mitondra azy any amin'ilay matihanina.
Ny katarakta dia tsy manasitrana samirery. Raha miahiahy isika fa tsy mety ny mason'alika antsika dia tsy maintsy mandray andraikitra isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ny fomba hitsaboana katarak eo imason'ny alika
Torohevitra momba ny fanabeazana ny alika natsangana